WARKA MAANTA | Dayniile.com | Page 1339
Category: WARKA MAANTA
SAWIRRO: Banaanbax lagu taageerayey Farmaajo oo markale gilgilay Mogadishu
Feb. 11 WARKA MAANTA Comments Off on SAWIRRO: Banaanbax lagu taageerayey Farmaajo oo markale gilgilay Mogadishu
(Dayniile Media – Mogadishu) – Maamulka Gobolka Banaadir ayaa soo diyaariyey banaanbax weyn oo lagu taageerayey madaxweynaha cusub ee Soomaaliya loo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Dad farabadan oo qaarkood ay wateen sawirada madaxweynaha Farmaajo ayaa isugu imaaday Taalada Daljirka Daahsoon, waxayna halkaas ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin isbadalka ku dhacay hoggaanka iyo siyaasadda dalka.
Waxaa kasoo muuqday masuuliyiin uu ugu magac dheeraa Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Moqadishu Yuusuf Xuseen Jimcaale Boorsaani.
Guddoomiyaha ayaa halkaas farriin kasoo diray isagoo madaxweynaha ka codsaday inuu soo celiyo xaqii la dafiray ee Gobolka Banaadir, sida uu hadalka u dhigay .
Guddoomiyaha oo ay ka muuqatay dareen kacsan ayaa ku dhawaaqay in xaqii siyaasadda ee Gobolka Banaadir uu maqan yahay isagoo sheegay in aysan ka daali doonin soo dhicinta xaqaas wuxuuna Alle ka baryey in madaxda dowladda Soomaaliya uu qalbigooda kusoo rido xuquuqda Gobolka Banaadir.
Ugu dambeyntii, Gobolka Banaadir ayaan xubno laga siinin Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya iyadoo la ogyahay in Gobolada kale ee wadanka ku leeyihiin Xubno matalo.
Haddaba hoos ka daawo sawirada banaanbaxaas gilgilay Mogadishu.
Beelaha Hawiye oo isku heysta xilka Ra’isul wasaaraha & Caqabado hortaagan Farmaajo
Feb. 11 WARKA MAANTA Comments Off on Beelaha Hawiye oo isku heysta xilka Ra’isul wasaaraha & Caqabado hortaagan Farmaajo
Muqdisho (Deyniile Media)-Waxaa magaalada Muqdisho ka socda kulamo u dhexeeya Beelaha Hawiye kaa oo lagu baadi-goobaayo xilka Ra’isul wasaarenimo ee dalka.
Kulamada ayaa ka kala socda Hoteelada waaweyne ee magaalada kuwaa oo ay ku shirsan yihiin Siyaasiyiin kasoo kala jeeda Beelaha Hawiye gaar ahaan Abgaal, Murusade iyo Habargidir oo loolan adag ugu jira qabashada xilka Ra’isul wasaaraha cusub.
Beelaha Abgaal, Murusade iyo Habar-gidir ayaa si hordhac ah Madaxweyne Maxamed C/llahi Farmaajo ugu gudbiyay liiska Musharaxiinta ay xilkaasi la doonayaan.
Beelaha Abgaal iyo Habargidir ayaa ku jira loolanka ugu badan ee xilkaasi lagu raadinaayo, halka Beesha Murusade ay dhinacyo badan kasoo mareyso Madaxweyne Farmaajo.
Maxamed C/llahi Farmaaj, Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa shaqada koowaad ee laga rabo waxaa ay tahay in uu soo magacaabo Ra’isul wasaaraha Soomaaliya , kaa oo soo dhisi doona xukuumada soo socota.
Madaxweyne Farmaajo ayaa fursad u heysta in Ra’isul wasaaraha uu kusoo magacaabo muddo 30 Cisho ah, waxaana muuqaneysa caqabado dhowr ah oo ka taagan kursigaasi.
Lama oga cida uu Madaxweynaha ka dhigan doono Ra’isul wasaaraha, waxaase loo badinayaa inuu kasoo dhex xulan doono Musharaxiintii uu ka guuleystay.
Muxuu Jibriil ka aaminsan yahay madaxweynaha cusub, mase la shaqeyn doonaa?
Feb. 11 WARKA MAANTA Comments Off on Muxuu Jibriil ka aaminsan yahay madaxweynaha cusub, mase la shaqeyn doonaa?
(Dayniile Media – Mogadishu) – Jibriil Ibraahim Cabdulle wuxuu ka mid ahaa musharixiintii sida aadka ah looga cabsanayey inuu kusoo baxo doorashada Soomaaliya balse ma dhicin sidaas weliba wuxuu ka galay liiska meesha ugu hooseeyo codadka ay heleen musharixiintii tartamayey.
Haddaba markii ugu horeysay ayuu ka hadlay sida uu u arko doorashada ka dhacday Soomaaliya iyo madaxweynaha cusub wuxuuna ku tilmaamay inuu Farmaajo yahay muwaadin jecel dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa, wax badana qaban kara haddii ay shacabkiisa garab istaagaan.
“Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waa muwaadin lasoo tijaabiyey oo dalkiisa samata bixin kara, wuxuu niyeysan yahay hal qaran wuxuuna gaarsiin karaa dalka meeshaa aan rabnay ee aheyd in laga baxo kala qoqobka iyo kooxeysiga, waana taageersnahay sidoo kalana waan la shaqeyn doonaa” ayuu yiri Jibriil oo saxaafadda la hadlayey.
Dhanka kale Jibriil ayaa shacabka Soomaaliyeed usoo diray codsi ku aadan inay si dhab ah ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya isla markaasna ay dhinacooda ka qabtaan dowladnimada usoo dilaacay Soomaaliya.
“Waxa aan isku soo sharaxnay oo aan raadineynay waxay aheyd inuu dalka helo isbadal dhaxalgal ah, waana la helay, yeysan na dhaafin fursadaan qaaliga ah, cid kasta oo Soomaali ah dalka iyo dibadada halaga shaqeeyo in guusha la ilaaliyo”. Ayuu hadalkiisa kusii daray.
Sidoo kale Jibriil ayaa u mahadceliyey mudanayaasha labada aqal ee dalka oo uu ku sheegay inay yihiin muwaadiniin daacad ah oo si dhab ah uga jawaabay guuxa shacabka.
QM oo farriin deg deg ah usoo dirtay Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo
Feb. 11 WARKA MAANTA Comments Off on QM oo farriin deg deg ah usoo dirtay Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo
(Dayniile Media – New York) – Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si diiran usoo dhaweeyey doorashadii xalaasha aheyd ee ka dhacay Soomaaliya Arbacadii lasoo dhaafay waxaana bayaankaan soo saaray 15 xubnood oo ka tirsan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Xafiiskeeda New York
War deg deg ah Labada Shaqsi ee ugu cad cad in Madaxweyne Farmaajo u magacaabo wasiirka koowaad
Feb. 11 WARKA MAANTA Comments Off on War deg deg ah Labada Shaqsi ee ugu cad cad in Madaxweyne Farmaajo u magacaabo wasiirka koowaad
Waxaa isa soo taraayo hadal heynta ugu badan shaqsiyaad ugu cad cad in xilka wasiirka koowaad loo magacaabi rabo dhowr shaqsi waloow la hadal haayo labadaan shaqsi oo aqoon leh
Cabdiraxmaan Ceynta oo horay u ahaa wasiirka qorsheenta ahna aqoonyahan da yar ayaa la hadal haayey in xilkaas loo magacabaayo iyadoona waloo yee jiraan shaqsiyaad kale oo badan
Prsafasoor ka dhiga Jamacad ku taalo dalak Mareyikanka heystana darajada ugus areysa aqoonta laguna magacaabo Cabduqaadir Cadoow ayaa saacadihii u danbeeyey soo galay dadka ugu cad cad in wasiirka koowaad loo magacaab isagoona xiligaan ku sugan magaalada Muqdisho wada hadal arintaas ku saabsan kawada yesheen Madaxweyne Maxamed CAbdulaahi Farmaajo
Prsafasoor Cabduqaadir Cadoow ayaa in mudaa diidanaa in uu xil ka qabto Soomaliya isagoona dhowr jeer loo balan qaday in uu xil qabto waloow uu ka biya diiday
Labadaan Shaqsi ee Cabdiraxmana Ceynte iyo Cabduqaadir Cadoow ayaa u muuqda kuwa la saadalinaayo in xilka wasiirka koowaad loo magacaabo madaama
Si kastaba ha ahatee Farmaaje ayaa looga fadhiyaa in uu soo magacaabo Raiisal wasare awood leh dalkana ka saaro dhibka heysto
Brafasoor Cabduqadi Cadoow waa shaqsiga suudka madoow wato oo bidixda xiga
Itoobiya oo war lama filaan ah kasoo saartay madaxweynaha cusub ee Somalia Farmaajo
Feb. 11 WARKA MAANTA Comments Off on Itoobiya oo war lama filaan ah kasoo saartay madaxweynaha cusub ee Somalia Farmaajo
(Dayniile Media – Addis Ababa) – Dowladda Itoobiya ayaa markale ka hadashay arrinta ku aadan madaxweynaha cusub ee loo doortay taliska Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Maalin ka hor ayey aheyd markii dowladda Itoobiya ay farriin dabacsan usoo dirtay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo taasoo ay ugu hambalyeenayeen ku guuleysiga kursiga looga arrimiyo Soomaaliya.
Farmaajo ayaa helay 184 cod halka madaxwweynihii hore ee dalka Xasan Shiikh Maxamuud uu helay 97 cod, ra’iisulwasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa ka dhawaajiyey in doorashadii ka dhacday Soomaaliya ay aheyd mid cadaalad ku saleysan isla markaasna lagu wada-qancay.
Isagoo hadalkiisa sii wato ayuu wuxuu sheegay in dowladiisa ay xoojin doonto xiriirka ay la leedahay dowladda cusub ee u dhalatay Soomaaliya.
“Waxaan ballan qaadayaa inaan si wanaagsan ula shaqeyn doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya si loo helo awood ay soomaaliya mar kale cagaheeda isugu taagto kadib dagaalo sokeeyo oo ka socday muddo 26 sano ah.” Ayuu yiri Hailemariam Desalegn.
Waxaa kaloo xusid mudan inuu Farmaajo halmbalyo ka helay dowladaha USA iyo United Kingdom kuwaas oo ku tilmaamay inay tahay guul usoo hoyatay Soomaaliya.
Farmaajo & Xasan Sheekh oo kulan uu albaabada u xiran yahay ku leh Villa Somalia
Feb. 11 WARKA MAANTA Comments Off on Farmaajo & Xasan Sheekh oo kulan uu albaabada u xiran yahay ku leh Villa Somalia
Muqdisho (Deyniile Media)-War hadda nasoo gaaray ayaa sheegaya in kullan uu albaabada u xiran yahay uu Villa Somalia uga socdo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo iyo Madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Sheekh.
Kulanka ayaa la sheegay inuu ka socdo Xafiiska Madaxweynihii hore ee aan wali lagu wareejin Madaxweynaha cusub, waxaana la sheegay in kulanka uu yahay mid ay banaan joog ka yihiin Mas’uuliyiinta kale.
Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo iyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh ayaa kulankooda uga hadlaaya Isbedelka dhacay, waxaana sidoo kale Madaxtooyada Somalia la barayaa Madaxweynaha cusub.
Sidoo kale, Labada Mas’uul ayaa kulankooda uga wada hadlaaya xil wareejinta, waxaana xusid mudan in Madaxweynihii hore Xasan Sheekh uu Madaxweynaha cusub tallo ka siinaayo dhismaha Dowladiisa cusub.
Dginaca kale, waxaa aad loo adkeeyay amniga Villa Somalia oo la geeyay Ciidamo dheeri ah oo uu wato Madaxweynaha Cusub.
Maamulka Gobolka Banaadir oo baaq u diray Madaxweynaha Cusub
Feb. 11 WARKA MAANTA Comments Off on Maamulka Gobolka Banaadir oo baaq u diray Madaxweynaha Cusub
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maanta boqolaal qof kula hadlayay Taallada Daljirka Dahsoon ayaa Madaxda dalka ugu Sareysa oo uu ka mid yahay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed ka codsaday in ay caddeeyaan Maqaamka gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Madaxda laga rabo in ay Mas’uuliyad ay iska saaran Maqaamka gobolka Banaadir.
Waxaa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay diyaar u yihiin in ay raadiyaan xuquuqda iyo sidoo kale Mataalada Siyaasadeed ee gobolka Banaadir.
Dhankakale Gudoomiyaha ayaa xusay in aan la ogalaan doonin Wadooyinka Muqdisho lagu xiro Jaqafyo , dhagaxaan iyo Kombooyin.
Amniga ayuu sheegay in laga rabo in ay sugtaan shacabka gobolka Banaadir ,islamarkaana loo furo wadooyinka.
Beesha Caalamka oo 3 arrimood ku faragalin doonta Madaxweyne Farmaajo
Feb. 11 WARKA MAANTA Comments Off on Beesha Caalamka oo 3 arrimood ku faragalin doonta Madaxweyne Farmaajo
Muqdisho (Deyniile Media)-Waxaa magaalada Muqdisho ka socda kulamo isdaba joog ah oo u dhexeeya Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Somalia Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo iyo Wakiilada Beesha Caalamka ka jooga Somalia.
Madaxweyne Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa qalbi furan u muujinaaya Wakiilada kadib markii ay soo shaac baxeen warar sheegaya in Farmaajo uu yareynaayo faragalinta Diplumaasiyiinta reer galbeedka ah ku hayaan Somalia.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa doonaaya in waxbadan ay ka ogaadan cida Madaxweyne Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo, uu u magacaabaayo Ra’isul wasaaraha iyo Xubnaha kale ee kamid noqon doona Xukuumada Cusub.
Waxyaabaha ay Wakiilada Beesha Caalamka faragalinta ku sameyn doonaan ayaa waxaa kamid ah:
1- Magacaabida Ra’isul wasaaraha uu yeelan doono dalka, si shaqsiga xilkaasi loo magacaabi doono uu u noqdo mid ka dhaadhicikara Beesha Caalamka.
2-Shaqsiyaadka uu Ra’isul wasaaraha u magacaabi doono Golaha Wasiirada, waxaana suuragal ah in Beesha Caalamka ay xubno ku dhexyeeshaan xukuumada.
3-Shaqsiyaadka loo magacaabi doono Hay’adaha amaanka, oo sida caadaduba aheyd lagu keeni jiray rabitaanka Beesha Caalamka, maadaama ay iyagu bixiyaan Tababarada iyo Saanada ciidan.
Madaxweyne Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo, ayaa waxaa horyaal Caqabado dhowr ah maadaama lagu xanto inuu yahay shaqsi aad uga fogaada Shisheeyaha ku dhaqan Somalia, oo uu aaminsan yahay inay sabab u yihiin horusocod la’aanta dalka.
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo, ayaan howlaha qaar uga maarmi doonin Beesha Caalamka, iyadoo sababtu ay tahay inay yihiin kuw miisaan Siyaasadeed ku dhex leh dalka.
Ahlu sunna oo ciidamadeeda ku wareejineysa Madaxweyne Farmaajo (Maxay tahay sababta)
Feb. 11 WARKA MAANTA Comments Off on Ahlu sunna oo ciidamadeeda ku wareejineysa Madaxweyne Farmaajo (Maxay tahay sababta)
Dhuusomareeb (Deyniile Media)-Maamulka Ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa si cad u sheegay in ciidamadooda ay kamid noqonayaan ciidamada dowladda cusub ee Soomaaliya.
Masuuliyiinta Ahlu sunna ayaa sheegay inay taageersan yihiin madaxweynaha cusub ee Soomaaliya loo doortay, waxayna sheegeen inay si dhow ula shaqeyn doonaan.
Xoghayaha Gaashaandhiga Ahlusunna Sheekh Isxaaq Xuseen Mursal, ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in ciidamadooda lagu wareejiyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
“Waxaan diyaar u nahay in ciidankeena aan ku wareejino dowlada cusub, maadaama Somali ay israacday, islamarkaana la soo wada dhaweeyay Madaxweynaha cusub ee Farmaajo.” Ayuu yiri Sh Mursal.
Halkaan ayuu jeediyay kadib markii uu siyaabooyin kala duwan ula hadlay warbaahinta magaalada Muqdisho.
Ahlu sunna ayaa si adag uga soo horjeeday dowladda uu hogaaminayay Xasan Sheikh Maxamuud, waxayna ku eedeeyeen inuu balamo kala duwan kaga baxay marar badan.
← 1 … 1,338 1,339 1,340 … 1,351 →